Momba anay - Yuhuan Jin Aofeng (JAF) milina Co., Ltd.
Yuhuan Jin Aofeng (JAF) milina Co., Ltd.
Yuhuan Jin Aofeng (JAF) milina Co., Ltd. mpanamboatra, izay manam-pahaizana manokana amin'ny extender frein (extender frezy wedge), varingarina volo, Synchronizer, ary vatan'ny rocker. Ny vokatray dia mety amin'ny kamio mavesatra, Masinina Engineering, bisy, fiara fambolena. Manondrana tsena manerantany izahay, ary manana laza kely ihany koa amin'ny tsena sasany, indrindra ho an'i Azia atsimo atsinanana!
Niorina tamin'ny taona 2005 isika, ary aorian'ny fandrosoana sy fanavaozana mitohy 15 taona, nahatratra rafitra mpamokatra matotra isika.
Niara-niasa tamin'ny orinasa OE izahay nandritra ny taona maro. Amin'ny alàlan'ny fanandramana ny fenitra OE, nanafatra fitaovana teknolojia mandroso maro izahay mba hahafahantsika manana fampandrosoana tsy tapaka ny tanjaky ny siansa.
Izahay dia nandalo taratasy fanamarinana ISO / TS16949. Ankoatr'ity rafitra ity dia manolo-tena hanao vokatra avo lenta sy avo lenta izahay.
Mikasika ny departemantan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, dia mikendry ny fikarohana avo lenta sy ny fizahana ireo vokatra vaovao izy ireo. Inona moa fa efa namokatra vokatra mihoatra ny 400 izahay.
1.Ny fidirana sy ny fanavaozana
2. Fikatsahana ny fanavaozana ny teknolojia
3. Mitohy ny fampandrosoana
4. Kalitao avo sy fanatontoloana
FAMPANDROSOANA NY ENTERPRISE
1.Ny tombony ara-teknika tsy manam-paharoa sy ny takiana faran'izay avo lenta dia mino izahay fa hifaninana kokoa amin'ny varotra ny vokatray.
2.Fandefasana pitsopitsony feno sy feno amin'ny famokarana.
3. fahatsapana andraikitra lehibe amin'ny famokarana
4. Misedra tsara ny kalitaon'ny vokatra.
5.Zahao ireo lafiny rehetra amin'ny teknolojia.
Ny orinasanay dia manaraka ny làlan'ny fampandrosoana avo lenta, manavao ary matianina ary mikendry ny fanatsarana tsy tapaka, vokatra tsara kalitao ary serivisy aorian'ny fotoan'andro.
Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Ny katalaogy dia horaisina tsara ho anontaniana anao. Manantena ny hanana fifandraisana orinasa vaovao miaraka aminao amin'ny ho avy.